Vula umnxeba · Indlela · Oyoun | Inkcubeko yokucinga kwakhona
Indlela - Iprojekthi yoThatho-nxaxheba loLuntu
Ngexesha leProjekthi yeProjekthi, kuyakubakho inani lemidlalo yomculo kunye nemiboniso yobugcisa eqhubekayo (nge-9 kaSeptemba-Okthobha 8). Umculo omnye kunye nomboniso omnye wobugcisa obukhethiweyo uya kukhethwa kule fowuni ivulekileyo. Ngale nto, simema onke amagcisa anomdla / amanyathelo obugcisa / abo banomculo kunye neeprojekthi zobugcisa ezihambelana nomxholo weprojekthi. Imidlalo ekhethiweyo kunye nemiboniso ziya kwabelwana nabaphulaphuli eBerlin ngasekupheleni kukaSeptemba kwaye baya kunikwa imbeko.
Ukuba ufuna ukuba yinxalenye yeNdlela, nceda uthumele ifayile ye-pdf echaza ngokufutshane iprojekthi yakho kunye nawe (ubuninzi be-1 inkcazo yeprojekthi yeprojekthi, iphepha eli-1 elifutshane bio) kwi-path@oyoun.de.
Siyavuya ukuva malunga neeprojekthi zakho. Umhla wokugqibela wokungeniswa kwezicelo nguSeptemba 20.
Sifumana ntoni kwimetropoles yehlabathi lanamhlanje kwaye yintoni amava eemetropoles? Kuyo yonke imfuduko yokufuduka, i-gentrification kunye notshintsho olukhawulezileyo lwedolophu ngaba i-metropole iyakwazi ukusilawula kwaye ngokuchaseneyo? Kuthekani ukuba iindlela esizithathayo yonke imihla ziqala naphi na kwaye asikhokeleli ndawo? Ngaba bubunye esiba nabo okanye 'bubunye' obunokubakho? Zithini iziphumo, ezinye iindlela, izisombululo kwaye inokuba yintoni indima yobugcisa kule nkqubo?
´Indlela` yiprojekthi yezobugcisa eyohlukeneyo eyenza ingxaki kubudlelwane phakathi komasipala ombaxa kunye nomntu ovela kummeli, umbono wobufazi. Kukhuthazwe ngabahambi ngeenyawo kwiindlela ezinkulu eIstanbul, ukufakwa koluntu okuthatha inxaxheba eTempelhofer Feld ngu-Umut Azad Akkel kumema abathathi-nxaxheba kumava afanisa imeko enzima yobukho bethu kunye / ngaphakathi / ngaphandle komasipala omkhulu. Kwangokunjalo, imisitho eyilelwe yaza yacwangciswa ngokusisiseko sengqokelela yofakelo, eyakwenzeka eTempelhofer Feld naseOyoun iyakudala iziko lamava kunye nelokwazi ukuhlalutya ubunzima bethu obungaphakathi / kunye / ngaphandle kwemetropole. Umbono opheleleyo kuthotho lweziganeko uya kuba usondela kumxholo kwiimbono ezininzi kunye nokuphakamisa imibuzo ebalulekileyo malunga nobunzima bayo bonke. Kuza kugxilwa eBerlin nase-İstanbul njengeemetropoles ezimbini ezinxibeleleneyo kunye nokuhamba kokufuduka phakathi kwezi zimbini kunye nefuthe lazo kunye neentsingiselo ezinokubakho kwimbali kunye neentsingiselo zamva nje. Kuya kubakho intetho yomculi, ukuhamba ngomculi phakathi kwe-Oyoun kunye nokufakela, umboniso, iingxoxo zephaneli, ukuhlolwa kwefilimu, imiboniso yomculo, ukusebenza kunye nemiboniso yaseshashalazini ngaphakathi kwenkqubo.
Ngubani onokufaka isicelo:
Amagcisa okanye amaqela aqokelelweyo
Indlela yokwenza isicelo:
Ukuba ufuna ukuba yinxalenye ye -Ndlela`, nceda thumela ifayile ye-pdf kungekudala uchaze iprojekthi kunye nawe (ubuninzi be-1 iphepha lenkcazo yeprojekthi, iphepha eli-1 elifutshane bio) kwi-path@oyoun.de.
Umhla wokugqibela wokungeniswa kwezicelo nguSeptemba 20th.
Nxibelelana nge-imeyile ukuba unayo nayiphi na imibuzo: thepath@oyoun.de